China 4 mu 1 mhando c hub usb c 3.0 hub docking station usb-c hub vanogadzira uye vatengesi |Wellink
Muenzaniso : C-S003
2 * USB3.0 A/ F (5Gbps chiyero)
1 * Type- C Mukadzi (yePD3.0 100W, W/ data 5Gbps)
MaPorts Ese Aunoda
USB 3.1 Type- C Murume
2*USB3.0 A/ F (5Gbps chiyero)
1*Rudzi- C Mukadzi (yePD3.0 100W,W/ data 5Gbps)
Yese Aluminium Alloy
Tora 2 USB- A data ports, 1 USB- C Power Delivery yekuchaja chiteshi, 1 USB- C data port, 1 RJ45 port- zvese muhubhu imwe.
Power Delivery Inopindirana
Inotsigira kusvika ku100W (minus 15W yekushanda) kupfuura-nekuchaja kuitira kuti ugone kukwirisa 15” MacBook Pro nekumhanya kuzere — zvese uchiwana mamwe mabasa ehub.(Chaja haina kuiswa).
Chinja mabhaisikopo, mapikicha, uye mimhanzi nekumhanya kusvika pa5 Gbps kuburikidza ne USB-C data port uye mbiri USB- A ports.
Aluminium-alloy Body Case
• Yakagadzirwa nearuminiyamu-alloy imba inoyevedza mune pfuti kupera, yakakosha mufambidzani weese type- c port laptop.
• Kushandisa aluminium alloy shell, kana ichienzaniswa nemaadapter epurasitiki, QGeeM USB- C Hub inogadzira dhizaini uye yakachengeteka, yakasimba, inoshanda uye yakanaka USB C adapta.Aluminium shell inopawo kukurumidza kupisa kupisa kudzivirira zvishandiso zvako.
Sleek Compact & Pocket- Yakakura
• Yakapfava uye yakashongedzwa, yakagadzirirwa kuve inopindirana neMacBook yako.
• USB- C Hub ine simba sechiteshi chekumisikidza kuti isangane nezvido zvako zvese, uye yakatetepa zvekuti inogona kutsvedza muhomwe yako kuti uende.
Kungosvika paInternet neiyo 10/ 100/ 1000 Mbps RJ45 Ethernet port.
Yakanyanya kugadzikana uye inokurumidza kupfuura isina waya network, inoita kuti iwe uve wakatsetseka uye nekukasira wired Internet yekubatanidza, chero kupi uye nekungopenya.
Application chip sumo
VL817:Inoshandiswa kuHUB ine USB3.0 interface, inosvika 4 U3 interfaces inogona kushandiswa, uye iyo USB3.1 GEN1 chiyero i5Gbps.
Mubvunzo:Sei internet yangu yakamira kana ndichishandisa iyo hdmi port pane yangu macbook pro 2017?
Mhinduro:Mudiwa, maita basa nekubvunza.
Sezvo bhuku idzva reMac rezvino kubuda rakatenderedza 1.0A, komputa inotanga kuzvidzivirira kana mutoro unopfuura 1A.Will prorly Paunenge uchishandisa, kutetererampt: USB mashandisirwo emagetsi yakakura, yakaremara, bvisa chinoshandura (uye dzima iyo yekudzima icon kana reboot).Isa zvakare, tanga isa PD simba rekupa (batanidza iyo hard disk uye mamwe masimba ane nzara madivayiri, kana iyo yekubatanidza isingashande prope.se batanidza charger kune Type- C socket yechigadzirwa kuti iite kuti ipe simba pakombuta, hard disk nemimwe michina).
Kana iyo PD adapta yaiswa uye yabviswa, iyo yakabatana USB mudziyo ichakurumidza kubviswa uye yodzoserwa mukati memasekondi mashoma.Kuti udzivise kurasikirwa nedata kana kukuvadzwa, dzivirira kubvisa iyo PD adapta kubva kune AC simba uchiendesa data.
Nintendo Chinja, USB SuperDrive, Yekutanga XPS 13 stock adapter.
Zvishandiso Zvisingatsigiri USB- C Media Display.
VivoBook L203MA Ultra- Thin, VivoBook 15 Thin uye Light Laptop.
Zvakapfuura: 5 mu 1 mhando c hub usb c3.0 hub docking station usb-c hub
Zvinotevera: Mini DP kuenda kuDVI MUKADZI 1080p inoshandura